महराको अडियो प्रकरण : के हो वास्तविकता ?? « नेपाली मुटु
« दुरताको पीडा
प्र.म.चुनाव; फाल्न सकिएन ऐजेरु »
सहमतीका लागि हुने प्रयासलाई बिथोल्न भारतद्धारा सुनियोजित रुपमा यो टेप प्रकरण ल्याइएको महराको भनाई छ । के होला त यसको वास्तविकता ?
के छ अडियोमा ?
अडियोमा दुइ जनाको संवाद सुनिन्छ । दुबैले अंग्रेजीमा संवाद गरे पनि अंग्रेजी एकदमै कमजोर छ । चाइनिज भनिएकाको स्वर चाइनिजको जस्तो सुनिदैन भने महराको भनिएको स्वर पनि महराको हो कि जस्तो मात्रै सुनिन्छ । एकातर्फबाट बोल्ने महरा भनिए पनि अर्का चाइनिज भनिएका व्यक्ती को हुन् ? अडियो सार्वजानिक गर्नेले पनि खुलाएका छैनन् ।
दुईको कुराकानीमा नेपालको राजनीतिक अवस्था, सांसद किनबेचको कुरा र सांसद किन्न पैसाको सहयोग, पैसा कहाँ बुझाउनेरलिने आदि बारेमा कुरा गरिएको छ।
संवादको नेपालीमा रुपान्तरित पाठ
चिनिया पक्ष: मिस्टर, महरा, नेपालमा कस्तो छ ? प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन आउदैछ, तपाईंलाई के लाग्छरु परिणाम आउला ?
महरा : निर्वाचन नजिक आइसक्यो। परिणामको बारे अहिले भन्न सकिन्न।
चिनिया पक्ष : के माओवादीले बहुमत ल्याउन सक्ला ?
महरा : ल्याउला जस्तो छैन। हामी कोसिस गर्दैछौं तर धेरै गाह्रो छ।
चिनिया पक्ष : बहुमत पुर्योउन के समस्या छ ?
महराः हामीसग १०–१५ जना सभासद छन्। तर ५० जति अझ चाहिन्छ।
चिनिया पक्ष : तपाईंलाई अन्य ५० जना सभासद चाहिन्छ ? मिस्टर महरा, ५० सभासदको समर्थन पाउन कस्तो सहयोग चाहिन्छ ?
महरा : यो असाध्यै गाह्रो छ। किनकि दक्षिणी शक्तिले उनीहरुलाई नियन्त्रण गर्दैछन्। त्यसैले पहिलो कुरो दक्षिणी शक्तिलाई तटस्थ बनाउनु आवश्यक छ। दोस्रो कुरा केही पैसा समेत चाहिन्छ।
चिनिया पक्ष : कति रकम चाहिन्छ ?
महराः यो अहिले भन्न सकिंदैन, यो कुरा अध्यक्षसग छलफल गर्नुपर्छ।
चिनिया पक्ष : मिस्टर महरा, मेरो एउटा साथी छ,जसले मद्दत गर्न खोजिरहेको छ। तर, ऊ नेपाल आउन सक्दैन। त्यसैले हामीहरु छलफल गर्न कुनै अन्य ठाउमा बस्न सक्छौं।
महरा : उनको लागि कुन स्थान सजिलो होला ?
चिनिया पक्ष : के तपाईंका लागि हङकङ सजिलो पर्ला ?
महरा : उहा कोसग भेट्न चाहनुहुन्छ ?
चिनिया पक्ष : यसका लागि अध्यक्षसग नै छलफल गर्नुपर्छ। अरुले हुदैन।
महरा : अध्यक्षका लागि अहिलेको समयमा यताउता जानु ठीक हुदैन। उहा हङकङ जानु भयो भने सबैले शंका गर्छन्। किनकि, उहा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ।
चिनिया पक्ष : त्यसो भए तपाईं अध्यक्षको प्रतिनिधि भएर मेरो साथीसग भेट्नु हुन्छ त ?
महरा : ठीक छ, म तयार छु। म जहा पनि जान सक्छु। तर, यो संवाद अध्यक्ष प्रचण्डसम्म पुर्या उनुपर्ने हुन्छ। तपाईंले यो संवाद प्रचण्डलाई पुर्यासइदिनु भयो भने उहाले मलाई सबै अधिकार दिनुहुन्छ।
चिनिया पक्ष : हाम्रो प्लान यस्तो भयो मिस्टर महरा, ५० सभासदको समर्थन जुटाउन कति मद्दत चाहिन्छ, यसको बारेमा तपाईंसग भेट हुदा कुरो गरौंला।
महरा : सबैभन्दा राम्रो चीन नै हुनेथियो। चीनको चेङ्दु, यो स्थानको बारेमा कसैलाई थाहा छैन।
चिनिया पक्ष : यो अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो। यसमा सरकारको संलग्नता देखिनुहुदैन। तपाईंले बुझ्नु भयो म के भन्दैछु।
महरा : ठीक छ, सिंगापुर कस्तो होलारु हङकङमा धेरै नेपालीहरु छन्। सिंगापुर सबैभन्दा राम्रँ होला।
चिनिया पक्ष : ठीक छ, म साथीसग कुरा गर्छु।
महरा : हङकङ पनि ‘‘। म बेलुकी तपाईंलाई फोन गर्छु।
चिनिया पक्ष : के दुई दिनभित्र हङकङका सम्भावित स्थानबारे तपाईं बताउनुहुन्छ ?
चिनिया पक्ष : ठीक छ, म तपाईंको फोनको प्रतीक्षा गर्दैछु, यही नम्बरमा।
महरा : तपाईं आफ्नो स्रोतको माध्यमबाट हाम्रो अध्यक्षलाई खबर गरिदिनुहोस्।
चिनिया पक्ष : के म तपाईंको अध्यक्षसग कुरा गरौं त ?
महरा : म तपाईंलाई फोन गर्छु।
भिडियो आउँनुको कारण
पाँच पटक भयो नेपाली संसदले प्रधानमन्त्री दिन नसकेको । नेपाली राजनीतिको यो अस्पष्टताको कारण विभिन्न चलखेलहरु सुरु भएको छ । भाइ फुटे गँवार लुटे भन्ने नेपाली उखानले फेरि एक पटक सार्थकता पाएको छ । बन्न नसकेको सहमतीलाई लम्ब्याउँन र नेपाली राजनीतिलाई डरलाग्दो असहमतीको खाडलमा हाल्न देश भित्र र बाहिरबाट अनेक क्रियाकलापहरु भइरहेका छन् । नेपाली राजनीतिको पकड आफ्नो हातमा पारिरहन भारतले गर्ने छद्म युद्ध हामीबाट कहिले पनि लुकेको छैन । माओबादी नेता कृष्ण बहादुर महराको भनिएको अडियो प्रकरण पनि यही छद्म युद्धको नयाँ श्रृंखला मात्र हुन सक्छ ।
भारतिय दुतावासले नेपाली पत्रकारितामा हस्तक्षेप गर्न खोजे पछि नेपालमा स्वतन्त्र पत्रकारिताको माग गर्दै भारतिय दुतावासको बिरोध गरियो । भारतले यसैको बदला स्वरुप पत्रकारिताकै उपयोग गर्दै नेपाली राजनीतिमा प्रहार गरेको हुन सक्छ ।
कहाँबाट आयो अडियो ?
निस्सन्देह यो अडियोको स्रोत भारतीय एजेन्सी हुन्। भारतले नै यसलाई सार्वजनिक गर्न लगाएको हो। किनभने यो अडियो सबैभन्दा पहिले भारतीय मिडियाले नै प्रसारण गर्यो । भारतीय मिडिया र भारतीय लगानी भएको नेपाली मिडियामा नै अहिले यसबारे सबैभन्दा चासो व्यक्त गरिएको छ।
यदि यो अडियो साँचो हो भने
यदि यो अडियो साँचो हो भने नेपाली राजनीतिमा अब उत्तर चिन पनि सक्रियता खोजिरहेको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । नेपाली राजनीतिमा खसीबोका जस्तो सांसद किनबेच हुनु कुनै नौलो घटना होइन । महाकाली सन्धी देखि देशका साना मसिना मुद्दाहरुमा पनि सांसद किनबेच भएको प्रशस्त घटना बाहिर आएकै हुन् । यसैले लोकतान्त्रिक राजनीतिको घिनलाग्दो पाटोले नेपाली राजनीतिलाई नछाडेको प्रस्ट हुन्छ ।
अर्को डरलाग्दो बिषय गोपनियताको पनि हो । यदि यो अडियो साँचो हो भने यसले देखाउँछ भारतिय गुप्तचरहरु नेपालमा कति गहिरो गरेर बसेका रहेछन् भन्ने । र, हाम्रो गोपनियता कहाँ सम्म गोप्य रहन सक्ने रहेछ भन्ने ।
अडियो आए पछिको परिदृष्य
अब माओवादीका लागि सहमती बनाउँन अझ गा¥हो हुने छ । जुन दल माओवादीलाई समर्थन गर्नेछन् तिनीहरुलाई बिकेको पगरी गुथाउँन सजिलो हुने छ । यसैले नेपाली राजनीतिलाई यो अडियोले केहि पछाडि धकेल्न सक्नेछ । र, यो एकदमै खराब र हानिकारक कुरा हो ।
This entry was posted on September 4, 2010 at 9:40 pm	and is filed under समाचार विश्लेषण. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
7 Responses to “महराको अडियो प्रकरण : के हो वास्तविकता ??”
राहुल तिम्सिना said
यदि यो बोल्ने महरा नै हे भने अंग्रेजी चै बबाल रहेछ, हा हा हा, यदि यस्तै हो भने सेमिनार, मिटिङ को लागि विदेश जाँदा के हालत होला श्र
यो सबै माओवादीले रचेको प्रपोगोन्डा हो । हा हा हा
यो सबै भारतिय दलालहरुको माओवादीलाई बदनाम गराउँने चाल मात्र हो ।
यो केही पनि होइन । माओवादीलाई फसाउँन खोजेको हो । उनीहरुको सरकार बनाउँन नदिने षड्यन्त्र हो । यसलाई यत्ति ठुलो मान्नु हुन्न ।
madan bajracharya said
अहिले सारा नेपाल र नेपाली ले भारतीय दुतावास बिरुद्ध प्रेस स्वतन्त्रता नारा लागिरहेको बेलामा त्यहि प्रेस स्वतन्त्रता को नाजायज फाइदा उठाएर भारतले नेपाल र नेपाली माथि गरेको प्रहार हो यो .. यो कुरालाई माओवादी विरुद्ध कुनै बिपक्षी दल अथवा नेताले नाजायज फाइदाको लागि प्रयोग गर्नु हुन्न किन भने यो माओवादी विरुद्ध भन्दा पनि नेपाल र नेपाली प्रेस विरुद्ध गरिएको सड्यन्त्र हो…. अब त धोतिहरुले अति गर्न थाले…